Dowlada Soomaaliya oo soo saartay Warbixin la xiririta Xaaalda Cudurka Corona | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Dowlada Soomaaliya oo soo saartay Warbixin la xiririta Xaaalda Cudurka Corona
Dowlada Soomaaliya oo soo saartay Warbixin la xiririta Xaaalda Cudurka Corona
Wasaarada Caafimaadka dowlada Fedraalka Soomaaliya ayaa 28 January 2021 Maanta Waxay soo saartay Xaaladihii ugu danbeeyay ee gudaha Soomaaliya laga Xaqiijiyay iyo deegaanada ay ku sugan yihiin dadka Xanuunka laga helay.
Tirada dadka laga baaray cudurka COVID-19, ee usbuucii ugu dambeeyay gudaha Soomaliya Waxay gaaraysaa 4,053 sida ay sheegtay Wasaaarda Caafimaadka iyo daryeelka Bulshada Soomaaliya.
Dadkaasi waxaa Xanuunka Laga Helay: 30 Gobolka Banadir: waxaa ku sugan 14 deegaanada Somaliland: 15 ka mid ah ayaa laga diiwaan Galiyay halka qofka kalena u uku sugan yahay deegaanada Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland: 1.
Xaaladaha Cudurka Covid 19 ee Soomaaliya todobaadkaan laga Xaiijiyay ee 30 Gaaraya 25 ka mid ah waa lab halka shanta kalena ay Dhedig.
Dadka Xanuunka ka Bogsaday waxay Tiradoodu gaaraysaa: 14 sidoo kale waxa dhimasho ah lagama soo Tabin Soomaaliya todobaadkaan
Sida ay shaacisay wasaaarda Caafimaadka Soomaaliya Tirada Guud ee dadka Xanuunka Laga Helay waxay Tahada Maraysaa 4,784 guu ahaan dadka kasoo bogsaday waxay gaarayaan 3,700 halka Dhimashada Guud ee Cudurka Covid 19 Soomaaliya ay tahay 130 qof,dadka wali xanuunka isbitaalada kula jira waa 954 sida Maanta lagu Qoray bogga Rasmiga ah ee Wasaarada Caafimaadka Soomaaliya.
Previous articleGolaha ismaamulka Kirinyaga oo beeniyay inuu ansaxiyay hindise sharciyeedka BBI
Next articleMadaxweynaha Maamulka Hirshaebelle oo Maanta Jowhar Dib ugu laabtay